ဟွာဝေး Mate 8 ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
ဟွာဝေး Mate 8 ဆန်းစစ်ခြင်း
အခါတိုင်းအသစ်တစ်ခုကို Huawei ကဖုန်းကိုထုတ်လွှတ်သည်, ဟုမေးတူညီတဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်: ကြှနျုပျတို့သညျဤဒီဇိုင်းရှိသည်နိုင်, ဒါပေမယ့်ရွားလှ software ကိုမပါဘဲ? ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, နှင့် ကို Nexus 6P, ကတောင်းဆိုချက်နောက်ဆုံးပြန်ပြောခဲ့သည်.
အဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုကြောက်စရာဆော့ဗ်ဝဲနဲ့နှင့်ဖွင်အတိအကျဘာအိမ်ထောင်ဖက်နညျးလမျးမြားစှာရှိတစ်ဦးက Nexus 6P အဘို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ် 8 ဖြစ်. ဒါဟာအလားတူတည်ဆောက်ထားပါတယ်, ကင်မရာက specs နဲ့ကအရမ်းမြန်င်, ဒါပေမဲ့တကယ့်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရဆဲ. ဒါဟာနေဆဲကောင်းတစ်ဦးကိုဖုန်းရဲ့, ဒါပေမယ့် Huawei ကယ့်ကိုကို USA နှင့် UK ရှိ၎င်း၏အမှတ်အသားလုပ်ဘို့အခြားလွဲချော်ခွင့်အလမ်းဖွင့်.
← Microsoft က Band2ဆန်းစစ်ခြင်း: အများစုမှာအစွမ်းထက် လိင် Tech မှအတွင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ →